Kungani Ukuhlanzwa Kwedatha Kubalulekile Futhi Ungazisebenzisa Kanjani Izinqubo Nezixazululo Zokuhlanzeka Kwedatha | Martech Zone
Kungani Ukuhlanzwa Kwedatha Kubalulekile nokuthi Ungazisebenzisa Kanjani Izinqubo Nezixazululo Zokuhlanzeka Kwedatha
NgoLwesibili, ngo-Mashi 15, i-2022 NgoLwesibili, ngo-Mashi 15, i-2022 UZara Ziad
Ikhwalithi yedatha ephansi iwukukhathazeka okukhulayo kubaholi abaningi bamabhizinisi njengoba behluleka ukuhlangabezana nezinhloso zabo ezihlosiwe. Ithimba labahlaziyi bedatha - okufanele bakhiqize imininingwane ethembekile yedatha - bachitha u-80% wesikhathi sabo behlanza futhi belungiselela imininingwane, futhi 20% kuphela wesikhathi kusele ukwenza ukuhlaziya kwangempela. Lokhu kunomthelela omkhulu ekukhiqizeni kweqembu njengoba kufanele baqinisekise mathupha ikhwalithi yedatha yamadathasethi amaningi.
Ama-84% ama-CEO akhathazeke ngekhwalithi yedatha asekela izinqumo zawo kuwo.
I-Global CEO Outlook, Forbes Insight & KPMG
Ngemva kokubhekana nezinkinga ezinjalo, izinhlangano zibheka indlela ezenzakalelayo, elula, nenembe kakhudlwana yokuhlanza nokwenza idatha ifane. Kule bhulogi, sizobheka eminye yemisebenzi eyisisekelo ehilelekile ekuhlanzeni idatha, nokuthi ungayisebenzisa kanjani.
Kuyini Ukuhlanzwa Kwedatha?
Ukuhlanzwa kwedatha yigama elibanzi elisho inqubo yokwenza idatha isetshenziswe nganoma iyiphi injongo ehlosiwe. Kuyinqubo yokulungisa ikhwalithi yedatha esusa ulwazi olungalungile nolungavumelekile kumasethi edatha namanani amisiwe ukuze kuzuzwe umbono ongaguquki kuyo yonke imithombo ehlukene. Inqubo ngokuvamile ihlanganisa le misebenzi elandelayo:
Susa futhi ufake esikhundleni – Izinkambu kudathasethi zivame ukuqukatha izinhlamvu eziholayo noma zokulandela umkhondo noma izimpawu zokuloba ezingasebenziseki futhi ezidinga ukushintshwa noma zisuswe ukuze kuhlaziywe kangcono (njengezikhala, oziro, ukusika, njll.).
Hlaziya futhi uhlanganise - Kwesinye isikhathi izinkambu ziqukethe imininingwane yedatha ehlanganisiwe, isibonelo, i Ikheli inkambu iqukethe Inombolo Yomgwaqo, Igama lomgwaqo, imizwa, State, njll. Ezimweni ezinjalo, izinkambu ezihlanganisiwe kufanele zihlukaniswe zibe amakholomu ahlukene, kuyilapho amanye amakholomu kufanele ahlanganiswe ukuze uthole umbono ongcono wedatha - noma okuthile okusebenza esimweni sakho sokusebenzisa.
Guqula izinhlobo zedatha - Lokhu kubandakanya ukushintsha uhlobo lwedatha yenkambu, njengokuguqula Inombolo yocingo insimu eyayikhona ngaphambili Umzila kuya Inombolo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi wonke amanani emkhakheni anembile futhi avumelekile.
Qinisekisa amaphethini - Ezinye izinkambu kufanele zilandele iphethini noma ifomethi evumelekile. Ngalokho, inqubo yokuhlanza idatha ibona amaphethini amanje futhi iyawaguqula ukuze kuqinisekiswe ukunemba. Ngokwesibonelo, i Ifoni yase-US Inombolo kulandela iphethini: AAA-BBB-CCCC
Susa umsindo – Izinkambu zedatha zivame ukuqukatha amagama angengezi inani eliningi ngakho-ke, wethula umsindo. Isibonelo, cabanga ngalawa magama enkampani 'XYZ Inc.', 'XYZ Incorporated', 'XYZ LLC'. Wonke amagama ezinkampani ayafana kodwa izinqubo zakho zokuhlaziya zingawabheka njengahlukile, futhi ukususa amagama afana ne-Inc., LLC, ne-Incorporated kungathuthukisa ukunemba kokuhlaziya kwakho.
Fanisa idatha ukuze uthole izimpinda - Amasethi edatha ngokuvamile aqukethe amarekhodi amaningi enhlangano efanayo. Ukwehluka okuncane emagameni amakhasimende kungaholela ithimba lakho ukuthi lifake izinto eziningi kusizindalwazi samakhasimende akho. Iqoqo ledatha elihlanzekile nelisezingeni kufanele libe namarekhodi ahlukile - irekhodi elilodwa ebhizinisini ngalinye.
Okuhlelekile Kuqhathaniswa Nedatha Engahlelekile
Isici esisodwa sesimanje sedatha yedijithali ukuthi ayihambisani nokulingana endaweni yezinombolo noma inani lombhalo. Idatha ehlelekile yilokho izinkampani ezivame ukusebenza nazo - inani idatha egcinwe kumafomethi athile njengamaspredishithi noma amathebula ongasebenza ngawo kalula. Kodwa-ke, amabhizinisi asebenza ngedatha engahlelekile kakhulu futhi… lokhu kunjalo kufanelekile idatha.
Isibonelo sedatha engahlelekile ulimi lwemvelo olusuka kumbhalo, umsindo, nemithombo yevidiyo. Okukodwa okujwayelekile ekukhangiseni ukukhothoza imizwa yomkhiqizo kusuka kuzibuyekezo ze-inthanethi. Inketho yenkanyezi yakhiwe (isb. amaphuzu wenkanyezi engu-1 ukuya kwezi-5), kodwa ukuphawula akuhlelekile futhi idatha yekhwalithi kufanele icutshungulwe ngokucubungula ulimi lwemvelo (I-NLP) ama-algorithms ukwenza inani lobuningi bomuzwa.
Uyiqinisekisa Kanjani Idatha Ehlanzekile?
Izindlela ezisebenza kahle kakhulu zokuqinisekisa ukuthi idatha ihlanzekile ukuhlola zonke izindawo ongenayo ezinkundleni zakho futhi uzibuyekeze ngokohlelo ukuze uqinisekise ukuthi idatha ifakwe kahle. Lokhu kungenziwa ngezindlela eziningi:
Idinga izinkambu – ukuqinisekisa ukuthi ifomu noma ukuhlanganiswa kumele kudlule imikhakha ethile.
Ukusebenzisa izinhlobo zedatha yenkambu - ukuhlinzeka ngezinhlu ezilinganiselwe zokukhethwa, izinkulumo ezivamile zokufometha idatha, nokugcina idatha ngezinhlobo ezifanele zedatha ukuze kuncishiswe idatha kufomethi efanele kanye nohlobo olugciniwe.
Ukuhlanganiswa kwesevisi yenkampani yangaphandle - ukuhlanganisa amathuluzi ezinkampani zangaphandle ukuqinisekisa ukuthi idatha igcinwe kahle, njengenkundla yekheli eqinisekisa ikheli, inganikeza idatha engaguquki, yekhwalithi.
Ukuqinisekiswa - ukwenza amakhasimende akho aqinisekise inombolo yawo yocingo noma ikheli le-imeyili kungaqinisekisa ukuthi idatha enembile igcinwe.
Indawo yokungena ayidingi nje ukuba yifomu, kufanele kube isixhumi phakathi kwawo wonke amasistimu adlulisa idatha isuka kwenye isistimu iye kwenye. Izinkampani zivame ukusebenzisa amapulatifomu ukuze zikhiphe, ziguqule, futhi zilayishe idatha (ETL) phakathi kwamasistimu ukuqinisekisa ukuthi idatha ehlanzekile igcinwa. Izinkampani zikhuthazwa ukuthi zenze ukutholwa kwedatha ukucwaningwa kwamabhuku ukuze kubhalwe wonke amaphuzu okungena, ukucutshungulwa, nokusetshenziswa kwedatha engaphansi kolawulo lwabo. Lokhu kubalulekile ekuqinisekiseni ukuthobela izindinganiso zokuphepha nemithetho yobumfihlo futhi.
Uyihlanza Kanjani Idatha Yakho?
Nakuba ukuba nedatha ehlanzekile kungaba yinto enhle kakhulu, amasistimu wefa kanye nokuziphatha okuxegayo kokungenisa nokuthwebula idatha kuvame ukuba khona. Lokhu kwenza ukuhlanzwa kwedatha kube yingxenye yemisebenzi yamaqembu amaningi okuthengisa. Sibheke izinqubo ezibandakanya izinqubo zokuhlanza idatha. Nazi izindlela ozikhethela inhlangano yakho engasebenzisa ngazo ukuhlanzwa kwedatha:
Inketho 1: Ukusebenzisa Indlela Esekwe Ikhodi
Python futhi R yizilimi ezimbili zokuhlela ezivame ukusetshenziswa ezixazululweni zokubhala amakhodi ukuze kusetshenziswe idatha. Ukubhala imibhalo ukuze uhlanze idatha kungabonakala kunenzuzo njengoba uthola ukushuna ama-algorithms ngokuya ngohlobo lwedatha yakho, noma kunjalo, kungase kube nzima ukugcina le mibhalo ngokuhamba kwesikhathi. Ngaphezu kwalokho, inselele enkulu ngale ndlela ukubhala ngekhodi isixazululo esijwayelekile esisebenza kahle ngamasethi edatha ahlukahlukene, kunezimo ezithile zokubhala amakhodi kanzima.
Inketho yesi-2: Ukusebenzisa Amathuluzi Okuhlanganiswa Kwenkundla
Amapulatifomu amaningi anikezela ngohlelo noma angenakhodi izixhumanisi ukuhambisa idatha phakathi kwamasistimu ngefomethi efanele. Izinkundla ezakhelwe ngaphakathi ezishintshayo zithola ukuduma ukuze izinkundla zikwazi ukuhlanganisa kalula phakathi kwamathuluzi enkampani yabo. Lawa mathuluzi ngokuvamile ahlanganisa izinqubo ezicushiwe noma ezihleliwe ezingase zisetshenziselwe ukungenisa, ukubuza, noma ukubhala idatha isuka kwenye isistimu iye kwenye. Ezinye izinkundla, njengazo Inqubo ye-Robotic Automation (I-RPA) izinkundla, zingafaka ngisho idatha ezikrinini lapho ukuhlanganiswa kwedatha kungatholakali.
Indlela yesi-3: Ukusebenzisa ubuhlakani bokwenziwa
Amasethi edatha omhlaba wangempela ahluke kakhulu futhi ukusebenzisa izithiyo eziqondile ezinkambu kunganikeza imiphumela enganembile. Yilapho ubuhlakani bokwenziwa (AI) kungaba usizo kakhulu. Amamodeli okuqeqesha kudatha elungile, evumelekile, nenembile bese usebenzisa amamodeli aqeqeshiwe kumarekhodi angenayo kungasiza ukuhlaba umkhosi okudidayo, ukuhlonza amathuba okuhlanza, njll.
Ezinye zezinqubo ezingathuthukiswa nge-AI ngesikhathi sokuhlanzwa kwedatha zibalulwe ngezansi:
Ithola okudidayo kukholamu.
Ukuhlonza ukuncika kobudlelwano okungalungile.
Ukuthola amarekhodi ayimpinda ngokuhlanganisa.
Ukukhetha amarekhodi amakhulu ngokusekelwe kumathuba okubaliwe.
Inketho yesi-4: Ukusebenzisa Amathuluzi Wekhwalithi Yedatha Yokuzisiza
Abathengisi abathile banikeza imisebenzi yekhwalithi yedatha eyahlukahlukene epakishwe njengamathuluzi, njenge isoftware yokuhlanza idatha. Basebenzisa ama-algorithms ahamba phambili embonini kanye nawobunikazi ukwenza iphrofayela, ukuhlanza, ukumisa, ukufanisa, nokuhlanganisa idatha kuyo yonke imithombo ehlukene. Amathuluzi anjalo angasebenza njenge-plug-and-play futhi adinga inani elincane lesikhathi sokugibela uma kuqhathaniswa nezinye izindlela.
Imiphumela yenqubo yokuhlaziya idatha mihle njengekhwalithi yedatha yokufaka. Ngalesi sizathu, ukuqonda izinselele zekhwalithi yedatha nokusebenzisa isisombululo sokugcina sokulungisa lawa maphutha kungasiza ukugcina idatha yakho ihlanzekile, isezingeni, futhi isebenziseka kunoma iyiphi injongo ehlosiwe.
I-Data Ladder inikezela ngekhithi yamathuluzi enothile ngesici ekusiza ukuthi ukhiphe amanani angaguquki nangavumelekile, udale futhi uqinisekise amaphethini, futhi uzuze umbono osezingeni kuyo yonke imithombo yedatha, uqinisekisa ikhwalithi ephezulu yedatha, ukunemba, nokusebenziseka.
Vakashela Isitebhisi Sedatha Ukuze uthole Ulwazi Olwengeziwe
Tags: Idathaukuhlolwa kwedathaidatha ezishintshayoukuhlanzeka kwedathaukuhlanzwa kwedathainsizakalo yokuhlanza idathaisoftware yokuhlanza idathaukukhishwa kwedathaukungenisa idathaukuhlanganiswa kwedathaileli yedathaukulayisha idathaidatha yesayensiukuguqulwa kwedathaukuguqulwa kwedathaakhipheindlela yokuhlanza idathaPythonidatha yekhwalithiidatha yokulinganisainqubo yokwenza i-robotici-rpaidatha ehlelekileidatha engahleliwe
Ifu Lokumaketha: Ungayakha Kanjani I-Automation ku-Automation Studio ukuze Ungenise Oxhumana Nabo Nge-SMS ku-MobileConnect
I-Typography Terminology: Ukusuka ku-Apex kuye ku-Swash kanye ne-Gadzook Phakathi... Konke Odinga Ukukwazi Ngamafonti